२ हजार जित्ने लोभमा ५० अण्डा खाने शर्त, ४२ वटा खाँदै दम तोडे ,भयो अचम्म,हेर्नुहोस। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
२ हजार जित्ने लोभमा ५० अण्डा खाने शर्त, ४२ वटा खाँदै दम तोडे ,भयो अचम्म,हेर्नुहोस।
एजेन्सी– चा’हिने भन्दा ब’ढी जे पनि हा’निकारक हुन्छ । उखान यसै बना’एको होइन ‘घा’टी हेरी हा’ड निल्नु’ । शरीरले पचाउन सक्ने क्षम’ता नहुँदा जिद्दी गरेर केही हुँदैन । उल्टै मृ’त्युको कारण बन्न सक्छ । यस्तै एउ’टा घ’टना घटेको छ भा’रतको उत्तर प्रदेशमा।
उत्तर प्रदेशको जौ’नपुरमा एक व्यक्तिले हासी–मजाकमै ५० वटा अण्डा खाने बाजी लगाए । त्यही बाजी नै उनको मृ’त्युको कार’ण बनेको छ ।उत्तर प्र’देशको बीबीगंज बजारमा ५० वटा अ’ण्डा खाने शर्तमा सुभाष यादवको ज्यान गएको हो । शा’हगंजको को’तवाल क्षेत्रस्थित धौरहरा गाउँका थिए ।
उनी गत शुक्रबार बेलु’की सु’भाष आफ्ना एक साथीसँग बीबीगंज पुगे’का थिए । जहाँ एक होटेलमा हासी मजाकमै उनीहरुबीच क’सले कति अ’ण्डा खान सक्छ भन्ने विषयमा कुरा चल्यो तँ भन्दा म के कम ? भन्ने स्थिति आएपछि दुईजनाबीच एक बो’तल म‘दिरा र ५० अण्डा जस्ले खान सक्छ उसले २ हजार रु’पैयाँ जित्छ भन्ने बाजी लगाए ।
बाजी जित्नका ला’गि शु’भाषले धमा’धम अण्डा खान थाले ४१ अण्’डा उनले आरामले खाए । तर, ४२ औं अण्डा खानेवित्तिकै उनी बेहोस ब’नेर ल’डे तत्पश्चात त्यहाँ भएका केही मा’निस हरुले उनला’ई त’त्काल जिल्ला अस्पताल पुर्या’एका थिए । तर अवस्था निकै ना’जूक बनिसकेको थियो ।
डाक्टरले उनलाई ल’खनउको संजय गा’न्धी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थामा रिफर ग’यो । तर उनीलाई त्यहाँ लगिए पनि कुनै फा’इदा भएन उपचारको दौरान उनको मृत्यु भयो ।भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएअनुसार सुभाषले यही वर्ष नै दोस्रो वि’वाह गरेका थिए । उनको पहिलो पत्नीबाट चार छोरी छन् ।
उनले छोरा जन्माउने चाहानाअनुरुप दोस्रो विवाह गरेको बताइन्छ ।उनकी दो’स्री श्रीमति पनि ग’र्भवती भएको बताइएको छ ।यस्तो अ’वस्थामा पतिको मृ’त्युको खबर सुनेर श्री’मती लगायत घर’का सदस्यहरु वि\_क्षिप्त बनेका छन्।
Previous साउदी अरब जान भारततिय नागरिक लाइ लाग्यो प्रतिबन्ध, कुनकुन देश परे लि’स्टमा हेर्नुहोस!
Next चीनले विकास गरेको कोरोना भ्याक्सिन सर्वसधारणमा उपयोग गर्न WHO को अनुमति,हेरी शेयर गरौं । ❣️